Xaaladaha Guud ee Qandaraaska ➡️ ▷ Raacayaasha ▷ ➡️
Kahor intaadan shaqaaleysiin wax adeegyo ah oo aan kugu siineyno boggaan internetka, waxaa lama huraan ah inaad aqriso shuruudaha iyo shuruudaha quseeya bixinta adeegyada ay soo bandhigayaan shabakada Internetka ee howlahaaga ugu weyn ee qeexida alaabada ama adeegyada. Iibinta alaabada qaab dijitaalka ah iyo adeegyada suuqgeynta internetka.
Adeeggu wuxuu marin u heli karaa oo kaliya oo uu kireysan karaa adeegyadan raacayaasha.waxa aqrinta iyo aqbalida shuruudahan qandaraas.
Adigoo aqbalaya shuruudahan, adeegsadaha waxaa ku xiraya shuruudahan, kuwaas oo, oo ay weheliso siyaasada gaarka ah, xukuma xiriirkayaga ganacsi.
Haddii aadan ku raacsaneyn qeyb ka mid ah shuruudaha, ma awoodi doontid inaad shaqaaleysiiso adeegyada la bixiyo.
raac.online waxay xaq u leedahay inay wax ka beddesho ama beddesho shuruudahan wakhti kasta. Haddii wax ka badalistu ay isbedel la taaban karo ku sameeyaan shuruudahan, ተከታxiiska.online ayaa kugu soo ogaysiin doona adiga oo dhajin ugu soo diraya barta websaydhkan.
Adeegyada la bixiyo waxaa heli kara oo keliya dadka sharciga iyo shakhsiyaadka ugu yaraan jira da'da 18 sano.
Shuruudahan ayaa la cusbooneysiiyay markii ugu dambeysay 14/04/2016
Iyada oo la raacayo qawaaniinta Sharciga 34/2002 ee Adeegyada Bulshada Macluumaadka iyo Ganacsiga Elektaroonigga ah (LSSICE), macluumaadka soo socda ayaa la bixiyaa:
• Aqoonsiga AGPD: "Isticmaalayaasha iyo rukumada websaydhka" "Macaamiisha iyo alaab-qeybiyeyaasha".
• Hawlaha bulshada waa: adeegyada suuqgeynta internetka.
Adeegyada lagu bixiyo websaydhkan
follow.online waxay samaysaa adeegyadan soo socda oo ku saleysan shuruudahooda qandaraaska gaarka ah:
• Qaabeynta istaraatiijiyadaha wada xiriirka khadka tooska ah / khadka tooska ah.
Qoritaanka war-saxaafadeedyada iyo dhoofinta qaran ama qeyb-qeyb ah.
• Qoritaanka nuxurka shirkadeed.
• Xiriirka ay la leeyihiin warbaahinta iyo wakaaladaha.
• Sawir dhijitaal ah oo loogu talagalay saxaafadda, shabakadda iyo dhacdooyinka.
Dib-u-habeynta aasaasiga ah ee JPG iyo horumarinta RAW.
• Tababbarka aasaasiga ah ee sawir-qaade dijital ah.
• La-talinta SEO ee websaydhada, baloogyada iyo e-Commerce.
• SEO aasaasiga ah ee maaddada webka.
• Falanqaynta iyo abuuritaanka astaanta xiriirka (SEO off bogga).
• Rakibaadda, qaabeynta iyo kobcinta WordPress ama Joomla.
• Qaabeynta nuxurka: joornaalada, joornaalada, buugaagta, buugaagta, xaashiyaha, pdf iyo buugaagta,
• Qaab-dhismeedka aasaasiga ah ee waraaqaha wax lagu dhejiyo, kaararka, caleemo-saarrayaasha, baararka iyo CTA websaydhka.
Suuqgeynta Nuxurka iyo Suuqgeynta Inbound
Qorshe istiraatiijiyadeed iyo qorshe bulsheed.
• Qoraalka nuxurka ee loogu talagalay blogyada, websaydhada ama microsites.
Maareynta astaamaha iyo waxyaabaha bulsheed (Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Tuenti, Google+)
• Ololayaasha SEM (AdWords, Facebook Ads, Ads Ads)
• Wararka iyo hadalka xayeysiinta.
• Xakamaynta farsamada ee shaxannada analogga.
Xaalad ahaan si ay qandaraas ugu siiso adeegyada la soo bandhigo, waxaa lagaa rabaa inaad iska diiwaangeliso foomamka ku habboon ee loo yaqaan ተከታkooda.waxayna siisaa macluumaadka isdiiwaangelinta. Macluumaadka diiwaangelinta ee aad bixiso waa inuu ahaadaa mid sax ah, oo dhameystiran oo waqti walba la cusbooneysiisto. Ka gaabinta in sidaas la sameeyo waxay ka dhigan tahay xad-gudub shuruudaha, oo laga yaabo inay ku dambayso kala-diriddii heshiiska lala galay raac.online.
Adeegyada qaarkood waxaa ka mid noqon kara xalalka saddexaad. follow.online waxay bixin kartaa xiriiriyeyaal websaydhada qeybta saddexaad iskaashi la leh raaciyaha.wax u fidinta adeegyada qaar.
Waxa kale oo aad ku raacsan tahay in Adeeggu ku jiri karo xalal amni oo xaddidaya adeegsiga iyo inaad u adeegsato adeegyadan iyada oo la raacayo qawaaniinta adeegsiga ee ay dejiyeen kooxda raacday.Folan iyo La-hawlgalayaasha Amniga iyo in adeegsiga kale oo kasta uu abuuri karo jebinta xuquuqda daabacaadda.
Waa mabnuuc in wax laga beddelo, laga leexiyo, dib loo noqdo, Injineer, kala furfuro ama wax la beddelo si kasta oo tikniyoolajiyadda amniga ay u siiso kuwa raacsan.
Jebinta amniga ee nidaamka ama shabakadda waxay ku dambayn kartaa mas'uuliyad madaniga ama dambiile ah.
Qiimaha iyo qaababka lacag bixinta
Waxaad ku raacsan tahay inaad bixiso adeegyada lagu wareejiyay ተከታdeet.soga qaabka bixinta ee ay aqbali karaan kooxda raacday.wax kasta oo lagu daro (oo ay kujirto cashuurta iyo khidmadaha bixinta dambe, sida ku habboon)
Bixintu markasta waa 100% hormarka adeegyadana waa la bixin doonaa markaan xaqiijinno bixinta.
Qiimaha lagu dabaqi karo badeecad kasta iyo / ama adeeg kasta waxaa lagu muujiyey websaydhka taariikhda amarku, oo ay ku jiraan, meeshii ay ku habboon tahay, dhammaan canshuuraha (Qiimaha lagu Kordhinayo) ee ku saabsan macaamil ganacsi gudaha Isbaanishka.
Nidaamka guud ee qiimaha lagu daray canshuuraha midowga Yurub
Iyada oo la raacayo qawaaniinta Sharciga 37/1992, ee Diseembar 28, nidaaminta canshuuraha iyo Tilmaanta Yurub 2008/8 / EC, howlgalka waa laga dhaafi karaa ama laguma soo rogi karo waxay kuxirantahay wadanka uu daganyahay iibsaduhu iyo xaalada ay isku ficil yihiin (ganacsade / xirfadle ama shaqsi). Sidaas awgeed, xaaladaha qaarkood qiimaha ugu dambeeya ee amarka waa la beddeli karaa iyadoo la tixraacayo waxa lagu qoro websaydhka.
Qiimaha adeegyada ama infoproductos ee ay iibinayaan kuwa raacsan.waxaa ka mid ah VAT Isbaanish. Si kastaba ha noqotee, qiimaha ugu dambeeya ee dalabkaaga wuu kala duwanaan karaa iyadoo kuxirantahay qiimaha VAT ee khuseeya amarka. Amarada loogu talagalay wadamada kale ee Midowga Yurub, VAT Isbaanishka ayaa laga goyn doonaa iyo qiimaha canshuurta VAT ee u dhigma dalka loo socdo ayaa la dabaqi doonaa. Qiimaha ugu dambeeya wuxuu muuqan doonaa inta lagu guda jiro xaqiijinta dalabkaaga wuxuuna ka turjumi doonaa qiimaha VAT ee u dhigma halka dalku u socdo badeecada.
Qiimaha Adeegyada wuu is beddali karaa wakhti kasta oo kaligiis lagu leeyahay iyo go'aan gaar ah oo laga raaco dadka raacsan shabakada. Adeegyadu ma bixiyaan difaac qiimeyn ama dib-u-celin marka laga hadlayo dhimista qiimaha ama dalabyada xayeysiinta.
follow.online wuxuu aqbalaa hababkan lacag bixinta:
Dhex dhexaadnimada taageerada iyo adeegsiga macquulka ah
Adeegyada waa in lagu codsadaa marinnada munaasibka ah ee lagu helo laguna soo jawaabo muddo macquul ah gudahooda.
Kanaalladaani waa foomamka ay ku kala qoran yihiin mid kasta oo ka mid ah adeegyada la bixiyo.
Codsi kastaa wuxuu ku xidhanyahay qiimaynta iyo ogolaanshaha ay raacaan ተከታkiisa.online.
follow.online waxay siin kartaa xalal kale macmiilka oo ay kujirto gudbinta shabakada shabakada wadaagayaasha.
Qodobka macquulka ah ee loo adeegsado
Ereyga "aan xadidnayn" wuxuu ku xiran yahay qodob isticmaalka saxda ah. Qeexitaanka adeegsiga cadaaladda waxaa go'aamiya kuwa raacsan.online, iyada oo kaligeed ah go'aanna gaar ah. Macaamiisha kuwa raacsan.online waxay tixgeliyaan ku takri-falka adeegga waxaa la xiriiri doona followers.online.
raac.online waxay xaq u leedahay inay joojiso adeegga haddii aan tixgelinno inay ka badan tahay qodobka macquulka ah ee adeegsiga.
Ka saarida mas'uuliyadda
follow.online dammaanad kama qaadi doonto in jiritaanka shayga adeegga ee qandaraaskan uu yahay mid joogto ah oo aan kala go 'lahayn, iyo sidoo kale luminta xogta lagu hayo macaamiisheeda, kala goynta howlaha ganacsiga ama wixii khasaare ah ee ka dhasha hawlgalka adeegyada, ama wixii laga filaayay Macaamiisha, oo ay sabab u tahay:
1. Sababaha ka baxsan xakamaynta kuwa raacsan. Sababo toos ah oo sababi kara iyo / ama sabab weyn.
2. Burburinta ay sababtay adeegsiga khaldan ee Macaamilka, gaar ahaan kuwa ka dhashay qandaraas bixinta adeeg aan habooneyn nooca nashaadka iyo adeegsiga ay sameeyeen Macaamiil iyo / ama qolo saddexaad iyada oo loo maro websaydhkeeda.
3. Joojinta jadwalka iyo / ama wax ka badalida waxyaabaha kujira heshiiska labada dhinac u dhexeeya ee dayactirka ama waxqabadka talaabooyinka ka reeban ee horey loogu heshiiyay.
4. Fayrasyada, weerarada kombiyuutarka iyo / ama falalka kale ee dhinac saddexaad ee sababa wadarta ama qayb ahaan suurtagalnimada bixinta adeegyada.
5. Internetka oo si qaldan ama u shaqeynaya.
6. Duruufo kale oo aan la saadaalin karin.
Sidan oo kale, Macmiilku wuxuu oggol yahay inuu ku taageero duruufahaas xaddidan oo macquul ah, taas oo uu si cad uga tanaasulayo inuu ka dalbado wixii mas'uuliyad qandaraas ama qandaraas dheeraad ah ah oo ka socda Online-ka SL wixii ku saabsan dhicitaannada, khaladaadka iyo isticmaalka adeegga qandaraaska.
Khadka tooska ah ee 'SL' mas'uul kama noqon doono kiis kasta khaladaadka ama waxyeelada ka dhasha adeegsiga macmiilka ee adeegsiga iyo caqiidada xun. Sidoo kale Online SL mas'uul kama noqon doono cawaaqibta weyn ama yar ee ka dhalan karta xiriir la'aanta ka dhaxeysa Online SL iyo Macaamilka marka loo aaneynayo shaqeyn la'aanta emaylka la bixiyay ama been abuurka xogta uu Macmiilku ku bixiyay diiwaanka isticmaalahooda ee kuwa raacsan.online .
Sababaha baabi'inta heshiiska
Kala diriddii heshiiska adeegga ayaa dhici kara wakhti kasta oo labada dhinac midkood ah.
Khasab kuguma ahan inaad la joogto kooxda raacsan.Fat haddii aadan ku qanacsaneyn adeegeenna.
raac.online waxay joojin kartaa ama joojineysaa wax kasta iyo dhammaan Adeegyada qandaraasleyda la galaya Shabakada raac.online isla markiiba, adigoon ogeysiis hore ama mas'uuliyad ka saarin, haddii aadan u hoggaansanayn shuruudaha halkan lagu qeexay.
Marka heshiiska la kala diro, xuquuqdaada adeegsiga Adeegyadu isla markiiba way joogsan doonaan.
Waxyaabaha soo socdaa waxay sababi doonaan in heshiiska la buriyo:
• Beenta, gabi ahaan ama qeyb, macluumaadka lagu bixiyay nidaamka qandaraas bixinta adeeg kasta.
• Wax ka beddel, wareejin, injineer dib-u-dhac ah, kala-goosi, u kala-tag ama u beddel si kasta oo tikniyoolajiyadda amniga ay u siiso kuwa raacsan.online.
• Sidoo kale kiisaska ku xadgudubka adeegyada taageerada sababo la xiriira baahida loo qabo saacado ka badan kuwa lagu aasaasay qandaraaska.
Kala diriddu waxay la micno tahay luminta xuquuqda aad u leedahay adeegga qandaraaska.
Saxnaanta qiimaha iyo dalabyada
Adeegyada lagu bixiyo websaydhka, iyo qiimayaasha kuwan, ayaa diyaar u noqon doona iibsashada inta ay ku jiraan buugga macluumaadka adeegyada lagu soo bandhigay websaydhka. Isticmaalayaasha waxaa laga codsanayaa inay marin u galaan noocyo cusub oo shabakadda ah si looga fogaado khaladaadka sicirka. Sikastaba ha noqotee, amarada habraaca ku jira waxay ilaalin doonaan xaaladooda muddo 7 maalmood ah laga bilaabo maalinta la aasaasay.
Ka bixitaanka ganacsiga
Ka bixitaanku waa awooda macaamilka wanaagsani ku soo celiyo si uu ugu ganacsado muddo sharci ah gudahooda 14 maalmood, adigoon codsanin ama bixin wax sharraxaad ah ama ciqaab ah.
Xuquuqda ka bixitaanka looma adeegsan karo (marka laga reebo cilad ama cillad ku timid sheyga ama adeegga la qandaraasiyay), kiisaska soosocda ee lagu sheegay qodobka 45aad ee Sharciga Ganacsiga:
• Qandaraasyada bixinta alaabada la sameeyo iyada oo la raacayo qeexitaanka macaamilka ama si shaqsi ahaaneed u muuqata, ama in, dabeecadooda aan lagu soo laaban karin ama ay dhici karto inay si dhakhso ah u sii xumaato ama ay dhici karto.
• Qandaraasyada keenida codka ama duubista fiidiyowga, discs iyo barnaamijyada kombiyuutarka ee uu macaamilku qariyey, iyo sidoo kale feylasha kumbuyuutarka, ee loosoo diray elektiroonig ahaan, oo isla markiiba la soo bixi karo ama dib loo soo saari karo si loogu isticmaalo joogtada ah.
• iyo guud ahaan alaabadaas oo dhan oo loo idmaday masaafad loo sameeyay cabbirkeenna: dharka, horumarka sawirrada, iwm, ama u nugul nuskhaaminta (buugaagta, muusikada, ciyaaraha fiidiyaha, iwm.).
Waqtiga bixitaanka ee alaabada maadada dhijitaalka ah (sida buugaagta dhijitaalka ah), waa la xannibi doonaa wakhtiga furayaasha marin u helidda waxyaabaha ku jira dhijitaalka loo isticmaalo.
Xuquuqda ka bixitaanka, si waafaqsan qodobka 103.a ee sharciga 1/2007, laguma adeegsan doono bixinta adeegyada, marka adeegga si buuxda loo fuliyo, goorta la fulinayo fulinta, iyadoo si cad loo oggolaanayo Macaamiil iyo adeegsade iyo aqoonsigiisa qaybtiisa in uu ka warqabo in, mar haddii heshiiska uu gabi ahaanba fulinayo taageerayaasha.online, wuxuu lumin doonaa xuquuqdiisa bixitaanka.
Ka dib marka aad aqbasho waxqabadka qandaraasyada, ተከታdegaate.online, ayaa kugu soo wargalin doona taariikhda ay bilaabaneyso.
Haddii xuquuqda xallinta la dhaqan geliyo 10 maalmood Kahor bilowga adeegga, raaciyaha.waxay soo celin doontaa lacagta la helay iyada oo aan la hayn wax xannib ah weligoodna kama dambayn 14 maalmood. Haddii xaqan kor lagu soo sheegay lagu adeegsaday a muddo ka yar 10 maalmood, 50% qaddarka waa la soo celin doonaa, oo haddii mar dambe la adeegsado, qaddarka lama bixin doono.
Sidoo kale, raaciyaha.waxay sii wadi karaan inay joojiso qandaraaska haddii bixinta u dhiganta uusan sameynin adeegsadaha ama qaar ka mid ah ficilada lagu dejiyey qaybta sababaha kala diridda heshiiska la galay.
Sida loo baajiyo heshiiska adeegga
Haddii aad jeceshahay inaad baajiso heshiiskaaga raac.e.online, waa inaad nala soo xiriirtaa dalabka ka bixida heshiiska kahor intaysan adeegga qandaraasku bilaaban inuu socodsiinayo (eeg nidaamka iyo ka noqoshada hoosta)
raac.online waxay dammaanad u siineysaa macaamilka dib u soo celinta cadadka lagu bixiyay muddadii afar iyo toban (14) maalmood laga bilaabo taariikhda xiriirka isgaarsiinta la isku halleyn karo ee loo adeegsan karo ka bixitaankiisa iyadoo la raacayo in tani buuxiyeen shuruudaha oo ay aqbashay. raac.online.
Natiijooyinka ka bixitaanka
Haddii ay dhacdo inaad ka baxdo, waxaan soo celin doonnaa dhammaan lacagaha aad na siisay annaga oo aan dib u dhac dhicin, si kasta oo ay tahay, ugu dambeyn 14 maalmood taariikheed laga bilaabo taariikhda lagu ogeysiiyay go'aankaaga ka noqoshada Heshiiskan oo la bixiyay waxaa la ogeysiiyay 10 maalmood kahor taariikhda ay bilaabanayso shaqooyinka qandaraaska la galay.
Waxaan sii wadi doonnaa inaanu kuu celinno cashuur celinta iyadoo la adeegsanaayo isla habka lacag bixinta ee aad u isticmaashay macaamilkii ugu horreeyay, illaa aad si cad u siiso mooyaane; Si kasta ha noqotee, wax kharash ah oo kharash ah oo ku soo gala magdhow ah awgood kama soo bixi doontid.
Haddii adeegga sheyga qandaraaskani la bilaabay xilligii bixitaanka (14 maalmood), iyadoo la raacayo qodobka 108.3 ee Sharciga 1/2007, Online SL way haysan kartaa qaybta saamiga ah ee u dhiganta adeegga la bixiyay, oo ay ku jiraan adeegga taageerada iyo, haddii ay dhacdo in adeegga si buuxda loo bixiyay, iyadoo la raacayo qodobka 103.a ee sharciga kor ku xusan, xaq u yeelashada ka-noqoshada laguma dabaqi doono.
Soo-celinta u dhiganta lacagaha la bixiyay ee PayPal ama Stripe waxaa lagu sameyn doonaa isla isla kan, halka nooc kasta oo lacag celin ah lagu sameyn doono wareejinta bangiga loogu shubo koontada uu macmiilku bixiyo. Soo celinta lacagta ayaa la sameyn doonaa 14ka maalmood ee soosocda laga bilaabo taariikhda markii nalagu wargaliyay go'aanka ka noqoshadaada.
Dhamaan adeegyadii aan ku siinay, dabeecadooda, waxay ka badbaadi doonaan kala diridda haddii si buuxda loo bixiyo, oo ay ka mid yihiin, iyadoo aan la xadidin, qodobbada hantida, diidmada, magdhowga iyo xaddidnaanta mas'uuliyadda.
Foomka sheegashada ama ka noqoshada
Adeegsadeha / iibsaduhu waxay nagu soo wargalin karaan sheegashada ama ka noqoshada, emayl ahaan ama emayl ahaan: info (at) ተከታdeetka ama boostada boostada adreska lagu sheegay foomka bixitaanka.
Nuqul ka samee oo ku dheji foomkan gudaha Ereyga, buuxi oo ku dir emayl ama boostada.
Ku baraarujinta Online SL
macluumaad (at) raaco.online
Waxaan ku ogeysiinayaa inaan ka codsado / ka noqdo heshiiska iibka ee wanaagga / bixinta adeegan soo socda:
Maalinta shaqaalaysiinta: ………….
Haddii ay dhacdo dacwad, sheeg sababta:
HADDII AAD HESHID XUQUUQDA XIRIIRKA si loo maalgeliyo iibsiga masaafada dheer, ku dar qoraalka soo socda ogeysiiska ka bixitaankaaga:
Waxaa sidoo kale lagu ogeysiinayaa in sida ku xusan qodobka 29 ee Sharciga 16/2011, ee Juun 24, heshiisyada amaahda, in, maadaama aan ka baxay qandaraaskii bixinta badeecada / adeegyada oo aan si buuxda / qayb ahaan u maalgeliyey amaah ku xiran, Mar dambe kuma xirnaan doono heshiiska amaahda lagu yiraahdo oo aan ganaax la iigaga bixin doonin.
Marka ku xigta, ku tilmaan magacaaga macaamil iyo isticmaale ama macaamiisha iyo isticmaaleyaasha:
Hadda tilmaami cinwaankaaga macaamil ahaan iyo isticmaale ama macaamiisha iyo isticmaaleyaasha:
Muuji taariikhda aad sheeganeyso / kansalay heshiiska:
Saxiix dalabkaaga / ka noqoshadaada haddii lagu ogeysiiyo Online SL qaab warqad ah
(meel), illaa ……………………………… ee ……………………. ka mid ah 20
Soo celinta lacagta ayaa la sameyn doonaa 14ka maalmood ee soosocda laga bilaabo taariikhda la soo celiyay.
Xeerarka Macaamiisha Yurub
Komishanka Yurub wuxuu abuuray barxada ugu horeysa ee Yurub ee xalinta khilaafaadka ganacsiga khadka tooska ah ee uu daboolay sharciga macaamiisha ugu dambeeyay. Dareenkan, annaga oo mas'uul ka ah aaladda iibka qadka ee internetka, waxaa na saaran waajib in aan ogeysiino adeegsadeyaashayada jiritaanka masraxa qadka tooska ah ee xallinta khilaafaadka kale.
Si loo isticmaalo masalada xalinta khilaafaadka, adeegsaduhu waa inuu adeegsadaa isku xirka soo socda: http://ec.europa.eu/odr
Iyadoo la raacayo Sharciga Dhaqanka ee 15/1999, ee Diisambar 13, ee Ilaalinta Xogta Shakhsiyeed, Online SL wuxuu ku wargelinayaa isticmaalaha inuu jiro feyl xog shaqsiyeed oo loo aqoonsaday "Macaamiil / Alaab-qeybiyeyaal" ay abuureen isla markaana ay mas'uul ka yihiin Khadka tooska ah ee loo yaqaan 'SL' oo leh ujeeddooyin habboon oo daaweyn ah waxaa ka mid ah:
1. a) Maareynta xiriirka sharci ahaaneed ee dhaqaale ee ka dhexeeya hayaha iyo macaamiisheeda.
2. b) Maareynta qandaraaska adeegga ee macaamilka.
Ilaa xad uu oggol yahay cidda danaynaysa; ahaanshaha masuuliyada isticmaalaha sax ahaanta isku mid.
Haddii diidmada aan la sheegin, milkiilaha macluumaadka si cad ayuu u oggol yahay wadarta ama qayb ahaan loo oggolaaday in la sameeyo xogta la sheegay waqtiga loogu baahan yahay in la fuliyo ujeeddooyinka kor lagu soo sheegay.
Online SL waxaa ka go'an inay fuliso waajibaadka ka saaran qarsoodiga xogta shaqsiyadeed iyo waajibaadkeeda inay ilaaliso, iyo inay qaadato tallaabooyinka amniga ee looga baahan yahay sharciga quseeya si looga hortago wax ka beddelkooda, lumintooda, daaweynta ama helitaanka aan la oggolaan, had iyo jeer iyada oo loo eegayo gobolka tiknoolajiyada la heli karo.
Adeegsaduhu wuxuu hagi karaa isgaarsiintaada oo uu adeegsan karaa xuquuqaha helitaanka, sixitaanka, tirtirka iyo mucaaradka adoo adeegsanaya emayl ahaan: info (at) ተከታdeet.no oo ay weheliso caddeyn sharci ah oo sharciga waafaqsan, sida sawir qaabeynta DNI ama wax u dhigma, oo muujinaya mawduuca " DIIWAANADA DIIWAANKA ”.
Shuruudahan ayaa ku xusan siyaasadda asturnaanta ee Online SL.
Dhammaan macluumaadka iyo dukumiintiyada la isticmaalay muddada qandaraaska, horumarinta iyo fulinta shuruudaha qandaraaska ee nidaaminaya xiriirka ka dhexeeya Online SL iyo Macaamilka waa qarsoodi. Macluumaadka qarsoodiga ah looma fahmi karo sida lagu shaaciyay heshiis dhex maray dhinacyada, taas oo u soo shaac baxeysa isla sababtaas ama tan ay tahay in loo sifeeyo si waafaqsan sharciga ama xalinta garsoorka ee hey'ad awood u leh, iyo tan lagu helo dhinac saddexaad oo aan ku jirin waajibaad sir ah. Labada dhinacba waxaa waajib ku ah inay u hoggaansamaan waajibaadka asturnaanta oo ay ilaashadaan ugu yaraan muddo laba (2) sano ah ka dib dhammaadka shuruudaha qandaraas ee aan kor ku soo xusnay ee nidaaminaya xiriirka Online SL iyo Macaamilka.
Dhammaan macluumaadka uu soo helo macmiilka, haddii sawirro, qoraallo, marin loo helo macluumaadka sida isticmaaleyaasha iyo sirta ah ee WordPress, martigelinta ama kuwa kale, waxaa loola dhaqmayaa si qarsoodi ah, u wareejinta qaybaha saddexaad si adag ayaa loo mamnuucay haddii aan oggolaanshahaaga iyo marwalba isla ujeeddada taas oo xogta laga helay.
follow.online waxay xaq u leedahay inay sameyso, wakhti kasta iyo ogeysiis hore, wax ka badalida iyo cusboonaysiinta macluumaadka kujira Websaydhka, qaabeyntiisa iyo soo bandhigiddiisa, shuruudaha marinka, shuruudaha heshiiska, iwm. . Markaa USER waa inuu galaangal u yeelo noocii ugu dambeeyay ee bogga.
Si kasta oo ay tahay raacdaliyuhu.waxay mas'uul ka tahay wixii jabin kara heshiis kasta oo dhaca adiga, dayacaad ku saabsan goobta, adeegga ama wixii agab ah, wixii faa iido ah, isticmaal lumid, ama waxyeelo dhab ah, gaar ah, waxyeelo aan toos ahayn, shil, ciqaab ama natiijo nooc kastoo ah oo ka timaada si xun u isticmaalka aaladaha lagu siiyay.
Masuuliyada kaliya ee raacda Shabakada.waxaaay noqon doontaa in la bixiyo adeega qandaraaska xayeysiinta iyadoo la raacayo shuruudaha iyo sharuudaha lagu muujiyey siyaasadan qandaraas bixinta.
raac.online khasab kuma noqon doonto wixii cawaaqib xumo ah, waxyeelo ama khasaaro ee ka dhalan kara adeegsiga aan habooneyn ee badeecada ama adeegyada la bixiyo.
Hantida iyo warshadaha
Online SL waa milkiilaha dhammaan xuquuqda wershadaha iyo xuquuqda lahaanshaha ee bogga followers.online, iyo walxaha ku jira, oo ay ka mid yihiin joornaalada laga soo dejisan karo websaydhka.
Waa mamnuuc in wax laga beddelo, la gudbiyo, la qaybiyo, dib loo isticmaalo, la gudbiyo ama la isticmaalo dhammaan ama qayb ka mid ah waxyaabaha ku jira bogga ujeeddooyin ganacsi ama ganacsi iyada oo aan oggolaansho laga helin Online-ka SL.
Ku xadgudubka mid ka mid ah xuquuqaha aan kor ku soo sheegnay waxay noqon kartaa ku xadgudubka qodobbadaas, iyo waliba dambi ciqaab ah oo waafaqsan sharciga. 270 et seq. ee Xeerka Ciqaabta ee hadda jira.
Dhacdada uu isticmaaleygu rabo inuu ku soo wargaliyo dhacdo kasta, faallo ka bixiyo ama uu sheegto, wuxuu u diri karaa emayl macluumaadka (at) ተከታkiisa.ate oo muujinaya magaciisa iyo magaciisa, adeegga helay iyo sheegitaanka sababaha sheegashadiisa.
Si aad ulaxiriirto khadka tooska ah ee SL ama aad uhesho shaki, su'aal ama sheegasho, waxaad isticmaali kartaa mid kamid ah qaababka soosocda:
Afka heshiiska lagu afjari doono inta u dhaxaysa ተከታkiisa.online iyo Macaamiilku waa Isbaanish.
Awoodda iyo qaanuunka lagu dabaqi karo
followers.online iyo USER, ayaa lagu xukumi doonaa inay xalliyaan wixii khilaaf ah ee ka dhalan kara marin u helka, ama adeegsiga degelkan, sharciga Isbaanishka, loona gudbiyo Maxkamadaha iyo Maxkamadaha magaalada Granada.